Manni maree magaalaa Finfinnee amma jiru seeraan alaa? - BBC News Afaan Oromoo
Manni maree magaalaa Finfinnee amma jiru seeraan alaa?
Image copyright Mayor of Addis Ababa/Facebook
Bara darbe manni maree bakka bu'oota ummataa federaalaa filannoo bulchiinsi magaalaa Finfinnee raawwachuuf haalli mijataan waan hin jirreef yeroon filannoo akka dheeratu murteesse.
Manni Maree bakka bu'ootaa labsii chaartarii bulchinsa magaalattii fooyyeesseen, filannoon mana maree magaalichaa dheereffamuun alattis, hanga filannoon gaggeeffamuutti manni marii fi bulchiinsi magaalichaa haaluma jiruun akka itti fufuuf murtee dabarse ture.
Haa ta'u malee qaamooleen murteen mana marichaa seera qabeessa miti jechuun morman jiru.
Kanneen Bulchiinsi magaalaa Finfinnee seera qabeessa miti jedhan keessaa gareen 'Mana Mare Baalaadaraa Addis Ababa' jechuun of moggaase tokko.
Garee kana keessatti miseensa hojii raawwachisaa kan ta'e Obbo Henook Akliluu, qaamni magaalattii bulchaa jiru fudhatama seeraa waan hin qabneef 'baalaadaraan' hundeeffamu ibsa.
Akka Obbo Henook jedhutti, filannoon mana maree magaalaa Finfinnee yeroon waan hin adeemsifamneef bulchiinsi magaalattii ''beekamtii seeraa hin qabu.''
Heerri motummaa Itoophiyaa Keewwata49 keewwata xiqqaa 2 irratti Bulchiinsi magaalaa Finfinnee ofiin of-bulchuudhaaf aangoo guutuu qaba jedha.
Akkasumas Labsii chaartarii bulchiinsa magaalaa Finfinnee lakkoofsa 365/1995 kaasuunis bulchiinsi amma jiru seera taa'e kan bu'ureeffate miti jechuun morma Obbo Henook.
''Motummaan Finfinnee irratti filatamu waggaa hojii shan akka qabu ifatti kaa'ameera. Qaamni hojii raawwachiftuu magaalattii, waajjira kantiibaa dabalatee barri hojiisaanii waggaa shan."
"Waggaan shan sun darbeera. Barri yoo darbu ammoo furmaati filannoo gaggeessuudha. Yoo filannoo gaggeessuun hin danda'amne ammoo kanneen hawaasni kiyya jedhuufi kan filate gara aangootti fiduudha'' jedha Obbo Henook.
Afa yaa'iin mana mare Magaalaa Finfinnee Aaddee Ababach Nagaash ammoo, ''yadni manni marii Magaalaa Finfinnee fi bulchiinsi magaalichaa yeroonsaa xumurameera jedhuu ragaa dogongoraa fedhii namoota tokko tokkotiin akka babal'atu taasifamaa jiruudha,'' jedhan.
Aadde Ababach bulchiinsi magaalaa Finfinnee labsii Chaartarii 365/1995 fooyyessuun waan barbaachiseef, waggaa tokkoon dura lakkoofsa labsii 1094/2919 tti fooyyaa'usaa himu.
Labsiin fooyya'e kun ''filannoon magaalaa Finfinnee akka dheeratu qofa osoo hin taane, hanga filannoon gaggeeffamee bulchiinsi haaraan caaseeffamuutti manni maree hojiirra turee fi bulchiinsi magaalichaa akkuma tureetti akka itti fufuuf jechuun labseera,'' jedhu Aadde Ababach.
Labsii Chaartarii magaalaa Finfinnee fooyya'ee lakkoofsa 1094/2010'n bulchiinsi magaalattii fi manni maree hangi itti hojiirra turan kan hin daangeffamne ta'uu himu Aadde Ababach.
Labsichi Kantiibaa Itti aanaan Magaalattii akka mana maree magaalattiin ala mudamuuf kan hayyamu ta'ullee ni dubbatu.
Labsii lakkoofsa 1094/2010 'mormisiisaa'
Manni maree bakka bu'oota ummataa filannoon magaalaa Finfinnee yeroo hin murtoofneef akka dheereffamuu fi manni marii magaalichaa akka jirutti akka itti fufu kan murteesse, erga chaartarii bulchiinsa magaalattii lakkoofsa 3665/1995 lakkoofsa 1094/2010'tti fooyyeesseen booda.
Haa ta'u malee Obbo Henook manni maree bakka bu'oota ummataa bara hojii mana mare magaalaa Finfinnee dheeressuuf mirga hin qabu jedhu.
Kanafuu bara hojii mana maree magaalichaa dheeressuuf bakka aangoo hin qabaanneetti ammoo, labsii kanaan bulchiinsi magaalaa amma aangoorra akka turu taasifamee bu'ura seeraa hin qabu jechuun morma.
Heerri Motummaa biyyattii keewwati 49.2 bulchiinsi magaalaa ofiin of bulchuuf aango gutuu qaba, bal'inni isaa seeraan murtaa'a jedha malee, manni maree bakka bu'ota ummataa bara hojii mana maree Finfinnee ni dheerressa kan jedhu bakki itti jedhame hin jiru jedhe Henok.
''Osoo kallattii siyaasaatiin ilaallee, haalli qabatamaan amma keessatti argamnu kan filannoo gaggeessuuf hin hayyamne wan ta'ee, motummaan gara aangootti dhufu kan mirga ummata magaalittii fi kan heera mootummaa waliin wal simu ta'u qabaata," jedha.
''Manni maree bakka bu'oota ummataa labsii 1094/2010 raggaasisuu hin danda'u kan jedhamerratti yaada kennuu hin danda'u. Nuti garuu labsicha karaa seera qabeessa ta'een hojiirra olchaa jirra,'' jedhu Aadde Ababach.
Oggeessa seeraa kan ta'an Obbo Efireem Taammiraat garuu, manni maree bakka bu'oota ummataa bara hojii mana maree magaala Finfinnee dheeressuuf aangoo akka qabu jala muruun dubbatu.
Kanas yoo ibsan, ''Heera motummaa keewwata 49 jalatti bulchiinsi magaalaa Finfinnee itti waamamni isaa motummaa Federaalaatiif ta'usaa fi bulchiinsi magaalichaa mirgi ofiin of bulchusaa akkuma jirutti ta'e kana murteessuuf seerri akka bahu hima,'' jedhu.
Itti dabaluunis, ''seera jedhame keessaa tokko chaartariidha. Chaartaricha irratti ammoo ifatti mootummaan federaalaa kaka'uumsa isaatiin chaartaricha fooyyeessuu akka danda'u ibsameera,'' jedhu Obbo Efireem.
Chaartarii bulchiinsa magaalattii labsii lakkoofsa 365/1995 kan baasees mana mare bakka bu'oota uummataa motummaa federaalaati jedhu Obbo Efireem.
Kana malees, itti waamamni bulchiinsa Finfinnee motummaa federaalaatiif yoo jedhamu mana maree bakka bu'oota ummataa ilaallata jedhu.
Aangoodhumti buchiinsa magaalaa Finfinnee mataansaa kan madde mootummaa federaalaa mana maree bakka bu'oota ummataa irraayi jechuun falmu.
Kanaafuu manni marichaa bara hojii bulchiinsa magaalattii dheereessuuf aangoo qaba jedhu.
Filannoon magaalaa Finfinnee yoom gaggeeffamaa?
Manni maree bakka bu'ota ummataa bara darbe haala qabatamaa tureen filannoo gaggeessuun hin danda'amu jechuun gara bara 2011 A.L.I'tti dabarsuunsaa ni yaadatama.
Haaluma murtee sanaatiin osoo waggaan hin darbiin bordiin filannoo filannicha akka gaggeessuu eggama ture.
Haa ta'u malee, boordiin filannoo yeroo kaa'ameef keessatti filannoo gaggeessuu akka hin dandeenye beeksiseera.
Dubbi himtuun boordii Filannoo Biyyaalessaa Soliyaanaa Shimallis, bordiin filannoo mana maree bakka bu'otaatiin yeroo yaadame keessatti filannoo gaggeessuuf akka hin dandeenye eeruun manni marichaa murtoo akka itti kennuuf xalayaadhaan beksiisuu BBC'tti himte jirti.
Xalayaa jalqaba torbee kanaa mana marichaatiif barreeffameen, ''filannoo mana maree Finfinnee fi Dirree Dhawaa dabalatee filannoo naannoo gaggeessuuf filmaanni raawwachiftoota filannoofi leenjii kennuuf yeroo gahan akka hin jirre," ibse.
"Barri bajataas xumuramee waan jiruuf manni marichaa murtoo akka itti kennuuf gaaffiin dhiyaateera,'' jechuun dubbatti Soliyaanaan.
Rakkolee biyyaattiifi magaalaa Finfinnee
1 Amajjii 2018
Finfinnee: Piroojektiin misooma qarqara laggeenii magaalaa Finfinnee jalqabe
Uhuruu Keeniyaataa qabattoo gurraacha maarshaal aartii argatan
Abadallaa Hamdook MM Sudaan ta'uun waadaa galan
Daandii konkolaataan dhiphate miliquuf ambulaansiin deemu